Fandefasana paradisa mavokely any Moskoa - manafatra voninkazo
Voninkazo any Moskoa
30 sm 45 sm
Fanaterana ~ 2h., maimaim-poana any Moskoa
ary tsy vola ho an'ny fikambanana ara-dalàna
Voamarina ny fehezam-boninkazo sy ny mpanakanto
45 cm ny sakany
Hahavony 30 cm
Ny fandefasana ny fehezam-boninkazo tsirairay dia azo antoka Floristum.ru
Ny mpandraharaha dia tsy hahazo vola raha misy fitakiana kalitao.
Ahoana rehefa avy nandoa ny kaomandy?
Florist dia handefa anao ny fanamafisana ny baiko
Angony fehezam-boninkazo vaovao
Fanaterana voninkazo ho an'ny mpandray
Azafady mba avelao ny hevitrao momba ny fandefasana voninkazo
3525 Fehezam-boninkazo Rose
4433 Букет из белой эустомы
Lily - 19 pcs.
Nahatsapa - 3 pc.
Fantatra fa ny andriamanitry ny kotrokorana Thor amin'ny angano taloha alemanina dia tsy namela tselatra akory, izay nalefany tamim-pahatezerana tety an-tany, ary tehina voaravaka lilia fotsy. Inoana koa fa fanahy mivelona amin'ny voninkazo lisy rehetra, izay teraka ary maty miaraka amin'ity voninkazo tsara tarehy ity sy tsara tarehy. Rehefa latsaka ny alina dia mivoaka amin'ny tsiry ny fanahy rehetra ary manomboka mivavaka ho an'ny soa ho an'ny olombelona.
9096 Waltz malefaka
Lisianthus 7pcs., Eucalyptus 3pcs., Tishu taratasy
4455 Fehezam-boninkazo "fihetseham-po lalina"
20828 Микс роза в шляпной коробке
6137 Fehezam-boninkazo 25 raozy No. 2
Ny fifangaroan'ny alstroemeria mena sy fotsy dia hitondra fatra amin'ny majika sy ny hatsaran'ny filentehan'ny fahavaratra mafana amin'ny fiainan'ny olona nitory. Fanomezana kanto izay hahafaly ny mpandray azy mandritra ny fotoana maharitra, satria mitazona ny hatsaran-tarehiny amin'ny vazy lava kokoa noho ny voninkazo hafa i alstroemeria!
3154 andro mamiratra.
8168 Коробка с 27 розами микс